झरनाका विवाह अघि र पछिका पल - मनोरञ्जन समाचार - प्रकाशितः मंसिर ६, २०७४ - साप्ताहिक
झरनाका विवाह अघि र पछिका पल
अभिनेत्री झरना थापा
 विवाह जीवनको अत्यन्त महत्वपूर्ण पाटो हो । विवाहअघि आफ्नो जीवनसाथी को हुने होला ? भन्दै उसकै कल्पनामा रोमाञ्चित हुन पाइन्छ ।
 स्वतन्त्रता जीवनको अर्को स्वर्णिम कुरा हो । विवाहपछि पनि स्वतन्त्रता हुँदैन भन्ने त होइन, तर विवाहअघिको जस्तो जिम्मेबारीविहिन स्वतन्त्रता कहाँ हुन्छ र ?
मलाई विवाहअघि छोरी भएकैले चाहेको काम गर्न गाह्रो थियो । हाम्रो सामाजिक संरचना अझै पनि पुरातन सोचकै भएकाले आम महिलालाई झैं विवाहअघि चाहेजस्तो काम गर्ने स्वतन्त्रता थिएन, निकै गाह्रो थियो ।
विवाहअघिकी छोरी हुनुजस्तै विवाहपछि घरकी बुहारी हुनु उत्तिकै गार्‍हो छ । मेरो हकमा भने सुनिलजी (निर्माता सुनिलकुमार थापा) को परिवारले बुहारीभन्दा पनि छोरीको जस्तो व्यवहार गर्नुभयो, जसले गर्दा मैले बुहारी हुँदा पनि सहज महसुस गर्न सकेँ ।
विवाहअघि छोरीले जुन सहजताका साथ आफ्नो अध्ययन पुरा गर्न पाउँछिन्, विवाहपछि अध्ययनलाई निरन्तरता दिन कठिन हुन्छ । यो एउटा नराम्रो पक्ष हो । घरव्यवहारमा परेपछि पढाईलाई चाहेर पनि पुरा गर्न नसकिने रहेछ ।
विवाहपछि मैले आफ्नो इच्छाले करियरअघि बढाउन पाएँ । मेरो चलचित्र क्षेत्रमा आगमन, सक्रियता तथा निरन्तरता सबै विवाहपछि नै भएको हो । श्रीमानले नै मेरो चाहना बुझ्नुभएकाले मैले खुलेर चलचित्र क्षेत्रमा काम गर्न पाएँ । कलाकार हुँदै निर्देशकसम्म हुने अवसर पाएँ । यी सबै मैले विवाहपछि पाएका खुसी हुन् । त्योभन्दा पनि मैले आफ्नो सबैभन्दा ठुलो खुसी मेरी छोरी सुहानीका रुपमा मैले पाएकी छु ।
पामेलाको विवाह नगर्ने निर्णय